yU + co သည် Grand Park's NYELA အတွက်အံ့မခန်းဖွယ်ရာ ၂၂ ထပ်ပုံဖော်ခြင်းကိုဖန်တီးသည် NAB သတင်းများ | 22 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Yu + ပူးတွဲရန်း Park ရဲ့ NYELA များအတွက် 22-ပုံပြင် Projection မြေပုံအံ့မခန်းဖန်တီးလိုက်တဲ့
Display ကို Groundbreaking အဆိုပါဂီတ Center ကရဲ့နှစ်ပတ်လည်နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနား၏ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးထဲမှာအသံနဲ့ 3D ပုံရိပ်အတွက်မြို့တော်ခန်းမဖုံးလှမျးပါလိမ့်မယ်။
ဟောလိဝုဒ်- နှစ်သစ်ကူးအကြိုတွင်, Los Angeles မြို့ နေထိုင်သူများအတွက်အကြီးဆုံး 3D ဒစ်ဂျစ်တယ်မြေပုံ display တွေထဲကတစ်ခုကိုသက်သေခံဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည် Los Angeles မြို့ သမိုင်း။ အဆိုပါဂီတ Center ကရဲ့2၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်nd နှစ်စဉ်က Grand Park ရဲ့ NYELA အဖြစ်အပျက်, LA မြို့ရဲ့သမိုင်းဝင်မြို့တော်ခန်းမတစ်ဦးမြင့်မားဒီဂျစ်တယ်ပန်းပုအသွင်ပြောင်းလိမ့်မည်။ Garson ယု, ထိုဆုရဒီဇိုင်းစတူဒီယို Yu + ပူးတွဲသည်က Grand Park ကအဖွဲ့နှင့်အတူပူးပေါင်းထဲမှာ, အံ့မခန်း၏အနုပညာဒါရိုက်တာအားဖြင့်ပဋိသန္ဓေယူသောအကြောင်းအရာများကိုနှင့်အတူ မာလ်တီမီဒီယာ Display ရဲ့အစွန်း 3D အနာဂတ်မြေပုံ, အပြန်အလှန်အသံများနှင့်ကျင်းပမယ့်အစွမ်းထက်ဇာတ်ကြောင်းဖြတ်တောက်ပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ် Los Angeles မြို့၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်၎င်း၏လူတွေ။
"ကျနော်တို့ site ကို-တိကျတဲ့အဆောက်အဦဗိသုကာမှရိုးရာဒီဇိုင်းနှင့်ဇာတ်လမ်းဒြပ်စင်လျှောက်ထား၏ဖန်တီးမှုစိန်ခေါ်မှုအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြ," ယုကပြောပါတယ်။ "အများစုကဗိသုကာအနာဂတ်မြေပုံအဆောက်အဦးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ passive display ကိုပါဝင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ရန်ဇာတ်ကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အပြန်အလှန်အသံက melding ကကျော်လွန်သွားကြသည် Los Angeles မြို့ မတိုင်မှီမမြင်ရပြီ။ "
အဆိုပါတင်ပြချက်၏အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းချက်ချင်းသန်းခေါင်ဖို့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲရှေ့ယုနဲ့ Grand Park ကအဖွဲ့ကရေးသားညွှန်ကြားထားတစ်ခုဖှယျ 10 မိနစ်ဇာတ်ကြောင်းရုပ်ရှင်, ပါလိမ့်မယ်။ မြို့တော်ခန်းမမျှော်စင်၏တောင်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်မြို့ရိုးကိုတစ်ခုသို့ဆက်စပ်ခြင်း, 3D ရုပ်ရှင်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာများနှင့်မြင့်မားသောကိုယ်ပိုင်ခရီးစဉ်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ် Los Angeles မြို့ ကလေးတစ်ဦး၏ရှုထောအမှတ်ကနေ။ "ဒီဇာတ်လမ်း Angelenos ၏နေ့စဉ်ဘဝအပေါ်စင်တာ; ကြှနျုပျတို့ကိုဝိုငျး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုမကြာခဏသတိထားမိကြဘူးကြောင်းကိုအမှုအရာ, "ယုကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ရန်နှင့်ငါတို့မွို့မှကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်ဆက်သောအတွေ့အကြုံများကို evokes ။ "
သန်းခေါင်ဖို့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲအထိဦးဆောင်သည့်ငါးဦးနာရီအတွင်းမှာတော့ Yu + ပူးတွဲမြို့တော်ခန်းမကွန်ပျူတာကာတွန်းတစ်ဦးစိတ်ကိုဖမ်းစားရောစပ်အတွက်လွှမ်းမိုးသည်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအရေးယူရုပ်ရှင်ပညာနှင့်အချိန်-ချုံးပုံရိပ်အဖြစ်ကျယ်ပြန့်အော်ဒီယို / အမြင်အာရုံကစားကွင်းသို့ရန်းပန်းခြံအဖြစ်ပြောင်းလဲကြလိမ့်မည် ။ ပုံရိပ်ယောင်များဟာလူအစုအဝေး၏အသံအဖြစ်ဂီတ DJs များကပတ်ချာလည်နှင့်ပန်းခြံများတွင်ဒေသခံခညျြအနှောနေဖြင့်ကစားနှစ်ဦးစလုံးမှ playfully တုံ့ပြန်အဖြစ် theme "LA က၏နှလုံးခုန်" ဟုအဆိုပါ display ကိုအပြန်အလှန်သံကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
မြို့တော်ခန်းမရဲ့ထိပ် 22 ပုံပြင်များ spanning ကြောင့်အစဉ်အဆက်ထုတ်လုပ်သည့်အမြင့်ဆုံးအပြန်အလှန်အသံက display ကိုဖွစျလိမျ့မညျ Los Angeles မြို့။ "ဒီအပြန်အလှန်အနာဂတ်မြေပုံပုံရိပ်ယောင်များ, အလင်း, အသံများနှင့်လူထုပရိသတျအကြားဆက်ဆံရေးစူးစမ်း," ယုကရှင်းပြသည်။ "ကျနော်တို့အမြင်ရမှတ်တစ်ထင်ရသောအဆုံးမဲ့အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့အလင်းဆင်ဖိုနီသို့ဂီတဘာသာပြန်ဆိုလိမ့်မည်။ "
Yu + ပူးတွဲမူလအတွက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားရရှိခဲ့ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအဘို့အဓိကခေါင်းစဉ်ဒီဇိုင်းအတွက်၎င်း၏ဆန်းသစ်အလုပ်အတွက်။ ထိုအချိန်မှစ. စတူဒီယိုဒီဇိုင်း, အမြင်အာရုံဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတွေ့အကြုံမီဒီယာ၏အခြားဒေသများသို့ယင်း၏ repertoire တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Garson ယုကသူ့သဲအများပြည်သူအနုပညာတပ်ဆင်မှုအတွက်အရေးပါနှင့်အများပြည်သူကောင်းချီးရရှိခဲ့ အဆိုပါ Interactive မှနယူးယောက် (Tiny) နယူးယောက်မြို့ရဲ့ဆိပ်ခံတံတား 57 မှာ featured ။
အတွက်စတူဒီယိုရဲ့အလုပ် ဟောလိဝုဒ် နှင့်တဘက်က Grand Park ကအဖြစ်အပျက်၏စီစဉ်၏မျက်စိဖမ်းမိ။ "Garson နှင့် Yu + ပူးတွဲဒီဇိုင်း artistry နှင့်ရေတိုပုံစံဇာတ်ကြောင်းအတွက် excel," ဂရန်း Park က Programming ဒါရိုက်တာဂျူလီယာစိန်ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့အဘို့မိမိတို့အဓိကခေါင်းစဉ်အတွက်ကြောင်းကိုသိမြင် အောင်စ, မဟာနှင့်အစွမ်းထက်, Pi ၏ဘဝ နှင့်အခြားသောရုပ်ရှင်။ သူတို့ကချက်ချင်းအနေနဲ့ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ရန်ပြုလုပ်ပုံပြင်များကိုပြောပြဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။ ဒီစီမံကိနျးအတှကျအလှနျအရေးကွီးတယျ။ "
The Grand Park က NYELA အနာဂတ်မြေပုံ display ကိုပုချမှတ်ခြင်းကျော် 10 လစေ့သတည်း။ Yu + ပူးတွဲရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအသင်းဒေသခံအနုပညာအဖွဲ့အစည်းများ, မြို့အထင်ကရအဆောက်အ, အများပြည်သူဖြစ်ရပ်များနှင့်သာမန်နိုင်ငံသားတွေ featuring တိုက်ရိုက်အရေးယူရိုက်ကူးနာရီများစွာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာရှင်မူရင်းဂရပ်ဖစ်များနှင့်ကာတွန်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မာလ်တီမီဒီယာ ပရိုဂရမ်မာကို real-time equalizer သံကိုပုံရိပ်ယောင်ပိုထက်ငါးနာရီတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Carol Wong, YU + ၏ VP / အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူပူးတွဲစီမံကိန်းများ၏အတိုင်းအတာနှင့်ရှုပ်ထွေးကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်သော format နဲ့င်နှင့်ထွန်းသစ်စအသံ, အမြင်အာရုံနှင့်စီမံကိန်းနည်းပညာများ၎င်း၏အသုံးပြုမှုစတူဒီယိုရဲ့ဒီဇိုင်နာများ, အနုပညာရှင်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများမှုတ်သွင်းသူကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကမြင့်မားတဲ့3ပုံပြင်များရပ်နေတဲ့ 22 ရှုထောင်ဒေါင်လိုက်ပတ္တူဖြည့်စွက်၏စိန်ခေါ်မှုအပေါ်ယူစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြ" ဟုသူမကမှတ်ချက်ချ။ "ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုသစ်တစ်ခုနှင့်သိသိသာသာလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များလျှောက်ထားရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ task ကိုမှဆောင်ခဲ့သောစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စွမ်းအင်ရလဒ်အတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထင်ရှားဖြစ်၏။ "
Yu + ပူးတွဲအကြောင်း
စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက Yu + ပူးတွဲ။ အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာ, ဂိမ်းနှင့်အသစ်သောမီဒီယာများအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆုရပေါင်းစုံစည်းကမ်းဖန်တီးမှုကုမ္ပဏီတခုမှရုပ်ရှင်ခေါင်းစဉ်ပာအထူးပြုတဲ့ဒီဇိုင်းစတူဒီယိုကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်း-မောင်းနှင်ချဉ်းကပ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အများအပြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်ကြည့်ရှုဖျော်ဖြေကြောင်းဖြစ်မည်ဇာတ်လမ်းများနှင့်အတူစားသုံးသူထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းစျေးကွက်ဖြေရှင်းချက်စိတ်အား။
အတွက်ရုံးများနှင့်အတူ ဟောလိဝုဒ်ဟောင်ကောင်နဲ့ရှန်ဟိုင်း, YU + ပူးတွဲ။ ဒါရိုက်တာများ, ဒီဇိုင်နာများ, ထုတ်လုပ်သူများ, Animation, စာရေးဆရာများ, ပရိုဂရမ်မာများနှင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအနုပညာရှင်တွေပါဝင်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွက်တဆယ်တန်းစီဇယားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွက်တဆယ်ရေကူးကန်၏မတူကွဲပြားမှုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တိုင်းစီမံကိန်းကိုမှအတိမ်အနက်နှင့်မူရင်းထပ်ပြောသည်ကြောင်း Cross-ယဉ်ကျေးမှုအတွေးအခေါ်များနှင့်အတွေ့အကြုံများတဲ့ရငျးမွစျဖန်တီးပေးပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကိုသွား www.yuco.com.
ဂိမ်းများအတွက်ပြည့်စုံသောအသံ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ရန်သော့ဖွင့်သောအသံပါသည့် Periscope Post နှင့်အသံမိတ်ဖက်များ - ဧပြီလ 29, 2020
ကာတွန်း audio အကြောင်းအရာ ဖြစ်ရပ်များ အသားပေး post ကိုထုတ်လုပ်မှု အနာဂတ်မြေပုံ Visual Effects Yu + ပူးတွဲ 2014-12-22
ယခင်: MPSE Filmmaker ဆုကိုဂုဏ်ပြုခံရဖို့ Darren Aronofsky
နောက်တစ်ခု: Aja CION 4K / UltraHD / 2K / HD ကိုထုတ်လုပ်မှုကင်မရာအခုတော့သင်္ဘော